Shapewear nhasi kuchema kuri kure nenguo dzekupfekedzwa naamai vedu. Mazuva ano ivo vanopfeka uye vanofarirwa nenyeredzi dzakawanda uye celebs uye ndeyechokwadi yakajeka kune yega yega kabati.Asi nei? Sei isu tichipfeka chimiro?
Kunyangwe iri pati, yakashama kana yemakambani kupfeka, chimiro chechimiro chinogona kushandura kutarisa kwese uye kusimudza kuvimba kwako. Kune zvakawanda zvakanaka zvezvokupfeka zvekupfeka sezvo zvinobatsira muviri contour, kunyanya kana uchiedza kuwana zvakanakisa tarisiro usati wakananga kune zvimwe zviitiko zvakakosha. Uyezve, kutarisa zvakanaka nguva dzose kwakakosha kuti uite fungidziro munharaunda. Iri mhando yematehwe emuviri ayo anoshongedza matako, chiuno, chiuno, uye kuputika. Imwe yemabhenefiti ekutanga ekupfeka zvekupfeka ndeyekuita chikadzi silhouette. Iine yakakodzera shaper, iwe unogona kuwana iyo yakakwana horaglass nhamba pamwe nekukurudzira chipfeko.
Kubatsira kwekupedzisira kweyemukati mekupfeka uye chikonzero chakakurumbira chekupfeka zvekupfeka chimiro chakapfava. Kune zvipfeko zvekupfeka zvakagadzirirwa nhengo dzese dzomuviri kuti dzizovabatsira kutaridzika.
Anti-slip glue dhizaini pachiuno.No kutenderera, akareba kuvhara dumbu rako repazasi uye zvisinganyatsoonekwe pasi pehembe dzako.Extra rutsigiro munzvimbo yako yedumbu .Iyo yakakwira chiuno chimiro chekupfeka muviri inogadzirwa mune yakakwirira yakarongeka yekuumbwa mapanicha jira rinopa chaiyo kumanikidza chiuno chako, kudzora dumbu rako uye kudzikisira chiuno chako, kupeperezeka kwakanyanya uye kwakapfava, hapana kunzwa kwekudzora.Iyu muviri unopinza uchagadzira yako sexy body curve kuratidza kuvimba kwako.
Iyo Slimming Butt inosimudza ine yakangwara dhizaini, iyo inosiya nzvimbo yeubhiti rako uye yakatsvedza muhudyu zvinobudirira, haina kumanikidza muhudyu uye ichapa yakazara kuvharidzirwa kune butt.This butt lifter inogadzira mapfupi mapanari, ane 3D-chiuno magadzirirwo anovandudza buttock droop flat mamiriro, kukubatsira iwe kuvaka peach chiuno, kubatsira kwako butt kutaridzika uye kukuru.
Tipeiwo enhencer padded shapewear.Seamless butt lifter padded butt panties ne 4 inobvisa chiuno pads isu takasimudzira zvakanyanya mapads uye edges kuti tidzivise kuburitsa pachena mitsara pasi pe tights, jean, leggings kana kupfeka.Rongedza chiuno chako uye gadzira chiuno chako 'zvakasikwa curves. Kugadzira yako bum uye buttox nzvimbo inotaridzika yakakura uye yakatenderera chaiyo.
Prolapse uye zera zvinobatsira
Patinenge tichikura, muviri wedu unosangana nekukwegura. Izvi zvakasikwa chaizvo. Shapewear yevakadzi inobatsira muviri kuwana rutsigiro uye kudzivirira humpback, chest chest, chifuva prolapse, pail chiuno, flat muchiuno, nzara yakakurumbira, Turnip gumbo, gumbo rakakura, uye zvakawanda. Zvakare, vakadzi vanotambura nebhebhi prolapse vanogona zvakare kubatsirwa kubva muchimiro chechimiro sezvo ichisimudza zvishoma nerubatsiro rwakakodzera. Chikamu chakanakisa ndechekuti, kuburikidza nemachira anogadzira, inobatsira zvakare mukutama kwekudzikira uremu.
Kuvandudzwa kwesimiro uye mudumbu mhasuru
Shapewear yevakadzi ine yakajairika elasticity, uye nekudaro, inopa kumanikidza uye inotsigira musana wako. Izvi zvinoita kuti muviri wako ugare wakasimba. Izvo zvinobatsirawo mukuderedza marwadzo mune yepazasi kumashure uye lumbar nzvimbo. Izvi zvinonyanya kuvandudza kufamba kwako nekugara pamashure. Zvino, vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti chimiro chekupfeka chinogona kupfekwa chete kana muviri uchifukidzwa nehembe refu. Zvakanaka, hapana mutemo wakadaro, uye nekudaro, inogona kupfekedzwawo pasi pemasosi. Masheki akakwana kune vakadzi vanoda kuve inoonekera mune yavo yepamberi nhumbu chipfeko.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-02-2020